ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ငြင်းခုံခြင်း နှင့် လွတ်လပ်သော အမူအကျင့်”
အိမ်မှာဆို ”လူကြီးကို ခံမပြောနဲ့” ကျောင်းမှာဆို ”ဆရာကို အထွန့်မတက်နဲ့” ပါတ်ဝန်းကျင်မှာကျတော့ ”ကြက်ခေါင်းဆိတ်မခံ မလုပ်နဲ့” စသဖြင့် ပြန်လှန်စောဒကတက်ချင်စိတ်လေးတွေကို သင်းသတ်ခံခဲ့ရတာ ....။ မသိလို့မှ မမေးရဲတာ ... သံသယရှိတာကိုမေးခွန်းမထုတ်ရဲတာ ... ကိုယ့်အမြင်ကို မဖွင့်ဟရဲတာ ... ကောင်းတဲံ့ အစဉ်အလာ လို့မထင်ဘူး..။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဆန်တဲ့ ငြင်းခုန်မှုကို အားပေးချင်ပါတယ်။ Thesis, anti-thesis and then "synthesis" လို့ ဆရာတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်..။
ဆွေးနွေးတာ အပြုသဘောနဲ့ ငြင်းခုံတာ လိုအပ်ပါတယ်။
အချေအတင်ဆွေးနွေးခြင်းက ကောင်းပေမယ့် အငြင်းသန်ခြင်းကတော့ မကောင်းဖူး ထင်ပါတယ်။ အချေအတင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက် အနည်းဆုံး (၁) ကိုယ့်အယူအဆ, ကိုယ့်ရပ်တည်ချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတယ်။ (၂) တစ်ဖက်သားရဲ့ အားနည်းချက်, ကိုယ်ရဲ့ အားသာချက်ကို ဝေဖန်ရတယ်။ (၃) ကိုယ့်ရပ်တည်ချက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကိုယ်က တစ်ဖက်သားရဲ့ အားသာချက်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကိုပါ ရိုးရိုးသားသားမြင်ပြီး လက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ ... စကားစစ်ထိုးပွဲကနေ ဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်းအသွင်ပြောင်းသွားပြီး ပိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်ခံနိုင်မယ့် အဖြေမျိုးရကောင်း ရနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်သာအမှန်ဆိုတဲ့ တယူသန် ခံယူချက်နဲ့ အငြင်းသန်နေမယ်... ဒီထက်ပိုဆိုးတာက အကြောင်းရာနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာမယ် ရင်တော့ လူမုန်းများတာပဲ အဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ၊ မောင်နှမတွေကြားမှာ ငြင်းခုန်ရတာ အလွန်ဝါသနာပါတယ်။ လူကြီးတွေနဲ့ကျတော့ စောဒကတက်တာပေါ့။ ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲ စောဒကတက်မိတော့ ဆရာ ဆရာမတွေ မျက်မုန်းကျိုးတာ ခံရတယ်။
ငြင်းခုန်လွန်းတော့ ရန်များတယ်။ စောဒကတက်လွန်းတော့ အကျင့်ပါပြီး ဘယ်နေရာမဆို ဆန့်ကျင်ဘက် တွေးမိတယ်။ သိပ်တော့ မကောင်းဘူး။ ဒါနဲ့ နောက်ပိုင်းတော့ အကျိုးမရှိတဲ့ ငြင်းခုန်မှုမျိုး၊ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စောဒက တက်မှုမျိုး ကြိုးစားပြီး ရှောင်ပါတော့တယ်။
အထက်မှာ ကိုဧရာပြောခဲ့တာ နည်းလမ်းကျပါတယ်။
ကလေးတွေငယ်ငယ်တည်းက ဝေဖန်ငြင်းခုန်လိုစိတ်ကို အတင်းဖိနှိပ်ထားတာ မကောင်းပါဘူး။
ပြန်ခံငြင်းသလို အတွန့်တက်သလို မဟုတ်ဘဲ အချက်အလက်စုံစုံ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ဝေဖန်ဆွေးနွေးချေပတတ်လာအောင် လူကြီးတွေက လမ်းပြပေးသင့်ပါတယ်။
ငြင်းခုံခြင်းကို ဝါသနာမပါ၍ဖြစ်စေ၊ မကျွမ်းကျင်၍ဖြစ်စေ၊ အကျိုးမရှိဟု ယူဆ၍ဖြစ်စေ…. အကြောင်းကြောင်းကြောင့် နေရာတိုင်းတွင် ငြင်းခုံရန်ဝန်လေးကာ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါလျှင် သူတပါးတို့၏ အစီအမံများ၊ အယူအဆ အတွေးအခေါ်များနှင့် မတရားသဖြင့် အနိုင်အထက် ပြဋ္ဌာန်းသမျှတို့သာ လွှမ်းမိုးသွားပြီး မိမိ၏ လွတ်လပ်မှုနှင့် အခွင့်အရေးများလည်း တစထက်တစ လျော့ပါး ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။
I had argued with my teacher in the past.(High School)
The principal warned me to stop challenge to teacher.
I'm still arguing with examiner or interviewer.
ပို့စ် အသစ် မျှော်ရကြိုးနပ်ပါတယ်။
ကောင်းမွန် အကျိုးရှိသော ပို့စ် အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဆော်ရီး ... မျှော်ရ ကျိုး နပ်ပါတယ် ...
(ဆရာပေါ ကျနော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် မော်စီတုံးပြောတာ။)
ကျနော်ကတော့ လှပစွာငြင်းခုန်ခြင်းကို ကြိုက်တယ်..
ငယ်တုန်းကတည်းက ကိုယ့်ခံစားချက် ကိုယ့်အယူအဆကို မိဘကို ပြန်ပြောတတ်လွန်းလို့ခဏခဏ တံမြက်စည်းစာမိခံတယ် ကိုပေါရေ… ဟိုတနေ့ က ရုံးမှာ အရာရှိက appraisal အတွက် အစည်းအဝေးလုပ်တော့ အဲဒီအချက်ကိုပဲ weakness အနေနဲ့ထောက်ပြသွားတယ်… ကဲ အရိုးစွဲနေတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်… သားက ငယ်ငယ်လေးနဲ့မိဘပြောတာကို တော်ရုံလက်မခံဘူး… တခါတလေ သူကြောက်အောက် ကိုယ်ကခြောက်ရင် သူအတွေ့ အကြုံပုစိလေးနဲ့ပြန်ငြင်းချက်ထုတ်သေးတာ… အင်း… ဘယ်သူနဲ့ တူပါလိမ့်နော်…
Did you ndirectly talk to Ko Paw?
Did you indirectly talk to Ko Paw?
Ko Ayer is right. I agree .
ko u should think for his point out. U should accept for this.
ကိုဧရာ ပြောတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မ လေ့လာရသလောက် ကျွန်မတို့ လူမျိုးတွေ စကားစစ်ထိုးတာရော ဆွေးနွေးတာပါ နှစ်ခုစလုံးကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး လုပ်မတတ်သေးဘူး။ ကလေးဘ၀ ကျောင်းတက်တဲ့အချိန်တုန်းက စာကို ကျက်ပဲ ကျက်လာရပြီး မိမိလေ့လာနေရတဲ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတန်းထဲမှာ Problem Solving တို့ Group Discussion တို့ မလုပ်ခဲ့ဖူးတော့ ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာလည်း ပြဿနာတခုကို နည်းမှန်လမ်းမှန် ဖြေရှင်းဖို့ မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး။ နေရာတိုင်းမှာ ဒေါသအရှေ့ထားပြီး ကိုယ်နဲ့မတူ ရန်သူလို့ သဘောထားကာ ကဲ့ရဲ့ အပြစ်တင်ရှုပ်ချ၊ ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းပြီး နောက်ဆုံးမှာ အကွဲအပြဲ ရန်အငြိုးနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
စောက်ကျိုးနည်းပါလား ငပေါရေ...။ ငါ့စကားနွားရပြောတတ်တဲ့ မင်းလိုကောင်ကဒီလို Post မျိုးကိုရေးရဲတာကိုအံ့ပါ့ကွာ။ ခုလိုချိန် စလုံးမှာ မင်းဦးဆောင်ပြီး ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်ပါလား ။ လူဘယ်လောက်များ လာမလဲလို. ။ ငါ့စကားနွားရပြောတတ်တဲ့ မင်းလိုကောင်ရဲ. ဦးဆောင်မှုနောက်ကို စဉ်းစားဥာဏ်ရှိတဲ့လူကတော့ ပါမလာတော့တာ အသေအချာ။
I love your blog template...can you tell me where you got it?
lin si thu said...
ကို ပေါရဲ့ ပိုစ့်တွေကို ကြိုက်လွန်းလို့....
ကိုပေါက ငြင်းခုံခြင်းကို ကြိုက်ပေမဲ့ မလှပတဲ့ ငြင်းခုံခြင်းတွေကိုမဖတ်ချင်
ုငြင်း ဆိုတာ အများစု စုပေါင်းပြီး နောက်ဆုံးအဖြေ အများကို အကျိူးပြုစေရမည်ဟု သဘောထားက ကောင်းသော အလေ.အထ ဖြစ်စေခြင်ပါသည်
စာပေလေးတွေ ရေးတင် ကြသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်